लिची खाएर भारतमा कसरी गुमाए... :: नारायण घिमिरे :: Setopati
भारतको बिहारमा यसपालिको गर्मी सिजनमा लिची खाएर ४७ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएको छ।
कति मानिसले यो खबर पत्याएका छैनन्, कति डरले लिचीनै खान हुन्न रै’छ भनिरहेका छन्।
लिचीमा के हुन्छ त्यस्तो रसायन छ? जसले त्यति धेरै बालबालिकालाई मृत्युको मुखमा पुर्‍यायो?
त्यो भोक तृप्त गर्ने स्रोत ग्लुकोज मात्र हो। जब हाम्रो दिमागमा ग्लुकोजको आपूर्ति १० मिनेट मात्र रोकिन्छ त्यसले स्थायी रूपमै दिमागलाई भत्काइदिन्छ। त्यसलाई 'परमानेन्ट ब्रेन ड्यामेज’ भनिन्छ।
जब लिचीमा हुने एमसीपीजी/ एमसीपीएसीले क्यारनिटिनसँग टाँसिएर दिमागमा ग्लुकोजको आपूर्ति कमी गरिदिन्छ बालबच्चा बेहोस हुन्छन्। दिमागमा ग्लुकोज आपूर्ति बन्द नै हुन थाल्यो भने 'ब्रेन ड्यामेज’ हुन खोज्छ। त्यस्तो बेला बच्चा कोमामा जान्छ। ग्लुकोज आपूर्ति लामो समयसम्म रोकियो भने केटाकेटीको ज्यानै जान्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३२, २०७६, ०१:०२:००